gvSIG: AmaGajes alokhu nokunye ukuhweba - iGeofumadas
gvSIG: Gajes lokhu futhi neminye imisebenzi eminingi
Agasti, 2009 I-GvSIG, qgis
Indlela amathuluzi wamahhala akhule ngayo iyathakazelisa, eminyakeni ethile eyedlule, kukhulunywa nge-GIS yamahhala, bekuzwakala njenge-UNIX, ngezwi likaGeek nasezingeni lokungathembi ukwesaba okungaziwa. Konke lokho kushintshe kakhulu ngokuhlukahluka kwezixazululo ezingakhulisanga ekwakhiweni kwezindlela ezijwayele ukulindelwa kepha futhi namasu amasha wokwenziwa ngobuningi, ukuhlolwa kanye nokuzivumelanisa nobuhlakani obuhlangene ngokuya ngokushintshaniswa. Izindinganiso ze-OSGeo nezinga le-OGC zingumphumela walokho kukhula.
Kwenzeka ukuthi manje ngokuzethemba okukhulu singancoma izixazululo zemithombo evulekile ezisebenza kahle (i-QGis noma i-gvSIG ukunikeza izibonelo ezimbili), kukhona ukwehluka ongakhetha kukho, yize futhi sazi ukuthi eminyakeni embalwa iningi lizovalwa noma lizohlanganiswa ngaphansi komthunzi okusimeme kakhulu (isibonelo amacala eQgis + Grass ne-gvSIG + Sextante). Udaba lokuthi ngubani ozosinda kumele lubhekwe njengamanje, ngoba ukwethembeka kunomkhawulo, ukusimama kwesoftware ye-GIS ngaphansi kwemithombo evulekile yemithombo kusekelwe ezinsikeni ezinjenge: Ubuchwepheshe, ibhizinisi kanye nomphakathi.
Ukusimama kwezobuchwepheshe Kuyalawuleka ngandlela thile, noma okungenani kubonakala sengathi isigqi saso sobuhlanya sokwenza intuthuko singasebenzi yonke imizuzu engu-5 akusasethusi. Kepha sifunde ukuqonda ukuthi le futhi iyindlela yokuhlanza indawo futhi izinhlelo zokusebenza ezinezinkinga zokusimama ziyasuswa, yize kubuhlungu kwabathembekile. Ukwenza isibonelo, i-Ilwis, okuthi ngaphandle kokufaneleka kwayo, kunzima ukuthola ukuphuma ku-Visual Basic 6.
Ukusimama kwezezimali, noma lokho esikubiza ngokuthi ibhizinisi, uhambe ngokumangazayo. Manje kunamaphrojekthi amaningi asekelwa ukuvolontiya okumsulwa, ngokusebenzisa izisekelo, amaphrojekthi asungulwe ngokusemthethweni noma izinkinobho ezilula "zokusebenzisana nge-Paypal". Kuleli zinga, icala le-gvSIG liyancomeka, okuyingxenye ye- iphrojekthi enkulu yokuthuthela kwesofthiwe samahhala, inokusimama kwezezimali kuhlelwe kahle.
Kodwa ukusimama komphakathi Kubonakala sengathi yi-eksisi eyinkimbinkimbi kunazo zonke ukulawula, ngoba akuxhomekile kuphela "kumdali" kodwa ngoba inethonya elikhulu emkhakheni wezobuchwepheshe (ngazo zombili izindlela) futhi kungenza kube nzima ukuphatha inkinga yezezimali. Ochwepheshe bezezimali nabezobuchwepheshe baqeqeshwe yizifundiswa, futhi uma kungenjalo isayensi ngqo, kuchazwa ngokwezifundiso. Umqondo wokuthi "lolu hlobo lomphakathi" luvela ekukhulisweni kwe-Intanethi nasekuhlanganisweni kwamathrendi aguquke ngokwemvelo njengomphumela "womphakathi"; ukuze i-eksisi ihlukanise imikhakha eyahlukene, phakathi kwezokuxhumana, ezemfundo, ezokumaketha, ezobuchwepheshe nakho konke ngokugqoka kwengqondo yezenhlalo.
Ukuhlonipha kwami ​​labo abenza lo mkhawulo, ngamaphrojekthi afana ne-gvSIG, okulindelwe ukuthi kwenziwe amazwe omhlaba kunolaka olukhulu. Kumele ngivume ukuthi ingenye yamaphrojekthi engiwazisa ngobuqotho (ngaphandle kwezingozi zalo msebenzi), ngicabanga ukuthi bazuze okuningi hhayi kuphela endaweni yaseSpanishi (okuyinkimbinkimbi ngokwayo).
Omunye wemigqa yalesi axis (futhi okuwukuphela kwayo engizoyithinta namuhla) yinkinga "yokwethembeka komsebenzisi" ngokushintshaniswa kolwazi okuphindaphindiwe. Ukulinganisa lokhu kumele kube yinkimbinkimbi kakhulu, ngakho-ke ngizozisekela kokungenangqondo kunokuzivocavoca okulula:
-I-Wikipedia idliwe ngumphakathi.
-Umsebenzisi othembekile kwisofthiwe, othanda ukuxhumana, ubhala ngakho.
-Ngomphakathi womphakathi, bonke abasebenzisi abaqotho kule software, bazofaka isandla ku-Wikipedia.
Akunangqondo, ngiyazi, kodwa ngifuna ukubeka isibonelo, nakuba Wikipedia is kabanzi wagxeka izifundiswa njengoba fideligna umthombo, okuqukethwe kwayo zonke izinsuku kuba kubhekiselwa okokuqala futhi udlala indima ebalulekile ubuhlobo umsebenzisi nokusesha okuqukethwe.
Ngakho-ke, ngasebenzisa ikhasi lezinhlelo ze "geographic information" njengengxenye yokuqala, ngase ngiya emakhasini onke wezinhlelo ze-11 futhi ngabala inani lamagama lapho, kusukela esihlokweni kuya esihlokweni sesigaba.
Cishe amagama angu-5,000 afaka phezulu, umphumela wile ndlela elandelayo:
I-GvSIG + Sextant
Amathuluzi weMephu ejwayelekile
Qaphela ukuthi isibalo se-GvSIG + Sextante sithatha
I-21%, akumangazi, uma sikhumbula ukuthi lezi ziyizinhlelo eziye zazinikela kakhulu kumadokhumende ahlelekile ekwaziswa kumawebhusayithi awo asemthethweni, ziye zafaka imali uhlelo lwe-systematization lwenqubo, izincwadi, izinhlu zomsebenzisi kanye neminye imizamo eminingi yokwenza amazwe ngamazwe.
Singabona futhi ukuthi i-QGis + Grass ishiywe emuva, ukusabalalisa kwayo okunamandla akuyona into ephakathi kweSpanishi, nakuba iGrey mhlawumbe i-Open Source GIS edala kunazo zonke.
Lokhu kumane kuyinkinga yokwethembeka esekwe ekubuyisaneni, futhi ubheka iWikipedia njengesibonelo kuphela. Njengoba sibona, futhi ngokweneliseka, i-gvSIG + Sextante inethonya elibalulekile endaweni yaseSpain. Mhlawumbe singabona isimilo esifanayo ezinkundleni zokuxhumana, kuma-blogs, komagazini bamakhompiyutha nasezinkundleni zokuxoxisana, yize kunjalo, lokhu kuveza umthwalo omkhulu emphakathini.
Kepha iqiniso lokuthi "izinduku zethu" lisiholela ekungabazeni izici ezihlobene nokuxhumana alizami ukusikisela ukuthi singochwepheshe endabeni yokusimama. Kuyingxenye yokuba "ngumphakathi", ukuphendula okuvamile kwalabo abathemba ngokukholwa okukhulu kumaphrojekthi alobu bukhulu (yize, ngiyavuma, akulithetheleli ithoni).
Mhlawumbe kuyadingeka ukunaka ukusatshalaliswa kolwazi, okucwengeka ngeziteshi ezahlukahlukene ezikhuthaza lolu hlelo (njengendaba yeGeomática Libre Venezuela) noma ukuxhumana okungekho emthethweni kuhlu lokusatshalaliswa okuba amaqiniso angekho emthethweni nokwakha okulindelwe. Lezi zinto nezincane zilungiswa ngezinqubomgomo zezokuxhumana zezikhungo, lapho “imigudu yomphakathi” kumele yamukelwe, yenzelwe futhi iphikiswe, ukuqinisekisa ingxenye yalokho kusimama.
Kuyafaneleka ukubuyekeza ukuthi umphakathi usabela kanjani ekusakazweni, ngoba umphakathi uyinto ephilayo, unokuziphatha okufana nokwabantu, uyaphendula, uyacabanga, uzizwe, uyakhuluma, uyabhala, uyakhalaza, uyajabula futhi ngaphezu kwakho konke unalokho okulindelwe okusalungiswa. Isibonelo sendlela okulindelwe ngayo:
-Iyiphi into embi mayelana ne-gvSIG 1.3, ukuthi sesivele sibona gvSIG 1.9
-Ikuphi okungalungile nge-gvSIG 1.9: yini engazinzile
-Ikuphi okungalungile okungazinzile: asazi ukuthi kuzoba nini
- I-Moment: kubonakala sengathi maduze kuzobe sekuvele.
-Kuzoba nini ...
Kuyadingeka ukubuyekeza inkinga yomphakathi, kuphrojekthi enkulu kangaka, enendawo yomhlaba wonke, enamasiko amaningi. Ukuxhumana okungaguquguquki ngokusemthethweni akulimazi, uma kunegalelo ekusimameni komphakathi.
Ekugcineni okuthunyelwe kwangempela okuye kwashukumisela ukuba ngithinte isihloko engangizoyiqeda, ngemuva kokuthi ama-patches ayengeke akwazi futhi intambo entsha ayifani nendwangu eboshiwe.
Blog utshani I-GvSIG OS QGIS
Thumela Previous«Langaphambilini Ukuxhaswa kweNtuthuko yase-Urban
Post Next Guqula izithombe kuya ku-vectorOkulandelayo »